लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको भन्ने प्रधानमन्त्रीले निर्मलालाई न्याय माग्दा पक्राउनुभयो
- नरेशप्रसाद जैसी
शुक्रबार (२४ पुस) धनगढीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली आमसभालाई सम्बोधन गर्न आउँदै गरेको थाहा पायौँ । हामी केही विद्यार्थीले सल्लाह गर्‍यौँ । योजना बन्यो, त्यो आमसभामा निर्मलाका लागि न्याय माग गरी लेखिएको टिसर्ट लगाएर जाने । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बहिनी निर्मला पन्तको न्यायका लागि प्रधानमन्त्रीमाथि साङ्केतिक दबाब दिनु थियो ।
‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै ?’, ‘निर्मला पन्तको हत्यारा खै ?’, ‘जस्टिस फर निर्मला’, लेखिएको टिसर्ट लगायौँ र आमसभामामा गयौँ ।
उहाँ (ओली) आफूलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुहुन्छ । लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्नुहुन्छ । संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ । त्यसैले कतै हाम्रो दबाब काम पो लाग्छ कि भन्ने झिनो आस हामीलाई थियो ।
तर, हामीले नाराबाजी गरेका थिएनौँ । टिसर्ट लगाएर उहाँको भाषण सुनिरहेका थियौँ । उहाँले गज्जब भाषण गर्नुभयो । संविधानको कुरा गर्नुभयो, विकास र उन्नतिको कुरा गर्नुभयो ।
उहाँले आकर्षक शब्द छानीछानी भाषण छाँट्दै गर्दा त्यही मञ्चको तल रहेका हामी (जो निर्मलालाई न्याय देऊ भनेर लेखिएको टिसर्ट लगाएका थियौँ) लाई प्रहरीले एकाएक समात्यो ।
हामी कुनै पार्टीले पठाएका सेना थिएनौँ, न त कुनै एनजीओका खेताला नै । हामी स्वत:स्फूर्त रूपमा निर्मलाको न्यायका लागि त्यहाँ पुगेका थियौँ ।
हामीले सोचेका पनि थिएनौँ, टिसर्ट लगाएकै आधारमा पुलिसले समात्ला भनेर ।
धनगढीसम्म आइपुगेर प्रधानमन्त्रीले निर्मलाको सम्बन्धमा एक शब्द बोल्नुभएन । बरु 'निर्मलालाई न्याय देऊ' भनेर लेखिएको टिसर्ट लगाएका हामी विद्यार्थीलाई समातेर प्रहरी चौकीसम्म पुर्‍याइयो । प्रहरीले समाएपछि मलाई डर पनि लागेको थियो, म त विद्यार्थी हुँ, मेरो करिअरमा केही असर पो पर्ने हो कि !
मसहित धनगढीकै २४ वर्षीय विनोद खड्का, २९ वर्षीय सुरेश कुँवर, १८ वर्षीय प्रवीण खड्का, २३ वर्षीय आरुद शाह, २४ वर्षीय सागर जोशी र २१ वर्षीय राजेन्द्र शाही पनि पक्राउ परेका थिए । यी सबै साथी विद्यार्थी हुन् ।
दिउँसो पक्राउ परेका हामीलाई साँझ साढे ६ बजे छोडियो । प्रहरीबाट त्यस्तो दुर्व्यवहार केही भएन । तर, हामी अचम्मित भएका छौँ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको दाबी गर्नुहुन्छ । अझै लड्ने बाचा पनि गर्नुहुन्छ । आफूलाई अप्ठेरो पर्दा लोकतन्त्रका लागि हारगुहार गर्नुहुन्छ । रोइकराइ गर्नुहुन्छ । सडकमा मान्छे उतार्नुहुन्छ । तर, बलात्कारपछि मारिएकी बालिकालाई न्याय दिलाउनु त टाढाकै कुरा भयो, न्याय माग्नेलाई समेत पक्राउनुहुन्छ । अझै हामीले उहाँलाई पत्याइदिनुपर्ने ?
उहाँले आफ्नो पद जान लाग्यो भनेर संसद नै भंग गरिदिनुभएको छ । तर, नागरिकका न्याय र अधिकारका लागि उहाँको पहल खै ? गाम्भीर्य खै ? म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, कहाँ–कहाँ कतिलाई पक्राउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? कहिलेसम्म पक्राउनुहुन्छ ? एउटालाई पक्राए अर्को जन्मिन्छ । पद जोगाउन लगाएजस्तै तपाईंको शक्ति न्यायका लागि लगाइदिनुभएको भए तपाईंलाई अप्ठेरो पर्दा आज जनता स्वत:स्फूर्त रूपमा सडकमा आउँदैन थिए र ? अहिले तपाईं जनता भुल्याउन देश दौडाहामा लाग्नुपर्थ्याे र ? (शिलापत्रकी सुनिता विकले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २७, २०७७, १०:२०:००